Thwebula Construct 2 r259 – Vessoft
Thwebula Construct 2
Isigaba: Ukudalwa kwemidlalo
Ikhasi elisemthethweni: Construct 2
I-Wikipedia: Construct 2
Ukwakha 2 – a isofthiwe ukwakha imidlalo in ihluzo 2D. Isofthiwe ikuvumela ukudala imidlalo izinhlobonhlobo ezihlukene nokuba yinkimbinkimbi ngaphandle amakhono inhlelo. Ukwakha 2 iqukethe amathuluzi amaningi ukushintshanisa futhi sikala izinto, ukusebenza nge ihluzo kanye nemisindo, isethaphu ukulandelana yezenzo, imodeli amakhono ngokomzimba of the game njll Ukwakha 2 ihlinzeka kabusha imidlalo on yokusebenza izinhlelo ezahlukene futhi ikuvumela ukuba avivinye the game wadala HTML5 nabangani usebenzisa isiphequluli. Ukwakha 2 Lisenza ukudala siko plugins lokwandisa ukusebenza software noma ukulanda nezinye plugins kusukela indawo esemthethweni.
ukuthuthukiswa Game of yinkimbinkimbi ezahlukene kanye izinhlobo
Sebenza nge ihluzo kanye nemisindo
uhlelo Onamandla izenzakalo the game
amathuluzi Abaningi plugin
Usekela yokusebenza izinhlelo ezahlukene
Amazwana ku Construct 2
Construct 2 software ehlobene
Imvelo elula ukuthuthukisa anezele kanye software. Isofthiwe isekela izilimi eziningi zokuhlela futhi esivula amathuba ebanzi for development entsha umkhiqizo.
Ithuluzi eliphelele lokuthuthukiswa kwemidlalo yezinhlelo ezahlukene zokusebenza. Isofthiwe inesethi yemidwebo eqondile nemisindo ukufeza ukuklanywa kwekhwalithi yomdlalo.
Isofthiwe for game ukuthuthukiswa for the izinhlelo zokusebenza ezahlukene kanye udlala aduduze. Kukhona ukusekelwa 3D ihluzo futhi enamandla izithombe system.
Lena ithuluzi elihle kakhulu lokuqapha izinqubo eziqalisiwe, ukulawula ukuziphatha kwazo futhi ubuke ulwazi mayelana nesistimu.
Umdlalo othandwayo ukuba ukwakha izakhiwo ezahlukene emhlabeni wadala kusukela emabhuloki. Umdlali ine ukufinyelela umdlalo izindlela ezahlukene kanye ukuhlela kabusha eziningi ukuze wandise amathuba.
Isofthiwe usebenza nge amafayela ehhovisi lika ngetakhiwo letehlukene nekukhetfwa has a ukusebenza abalulekile futhi iqukethe iqoqo izifanekiso itholakale.
Lena isofthiwe yokurekhoda ividiyo kusuka kwesikrini sekhompyutheni futhi ngokufanayo ibeke amazwana ezenzweni ngesikhathi sokurekhoda ngenxa yekhamera yewebhu noma imakrofoni exhunyiwe.
I-VPN & Ummeleli
Ithuluzi ukuqinisekisa isivikelo uxhumano inthanethi. Isofthiwe kwenza ukuba akhethe iseva wayefisa ukulahlekelwa sakugcina ijubane internet.
The instrument wathumba isiqophi kusuka computer yakho. Isofthiwe kwenza ukusakaza izenzo kusukela screen ethandwayo isiqophi amasevisi.
Isofthiwe ukuhlela amathegi ngetakhiwo letehlukene audio. Futhi isofthiwe kwenza ukushintsha imininingwane in the amafayela original.